Home News Faahfaahino Kaso Baxaya Qarax Miino oo Haleelay Gaari Nuuca Xamuulka Ah
Faahfaahino Kaso Baxaya Qarax Miino oo Haleelay Gaari Nuuca Xamuulka Ah
Wararka an ka heleyno Gobolka Shabeelaha Hoose aya shegaya in gaari dad shacab ah ay sarnayen uu la qarxay qarax miino oo sababay dhimasho iyo dhawac.
Inta la xaqiijiyay laba ruux oo shacab ah ayaa ku geeriyootay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxasi miino oo qabsaday gaariga nooca xamuulka siday.
Qaraxan ayaa wuxuu ka dhacay inta udhaxeysa degaanada Bunqabad iyo Ambareeso ee Gobolka Shabellaha hoose, waxaana halkaasi ku dhintay laba ka mid ah rakaabkii saarnaa gaariga.
Saddexda qof ee dhaawaca uu ka soo gaaray qaraxa ayaa waxaa loo qaaday goobaha caafimaadka Magaalada Baraawe, waxaana u soo gurmaday ciidamada AMISOM oo dhaawacyada halkaasi ka qaaday.
Qaraxan miinada oo wadada ku aasnaa, ayaa sida Saraakiisha ay sheegeen waxaa wadada galiyay Ururka Al Shabaab oo la damacsanaa inay ku qarxiyaan gaadiidka AMISOM ee wadadaasi isticmaala,iyado ay si kordhayaan qaraxyada wadada dhinaceda lagu aaso oo inta badan absada gawaarida xamuulka ah ee shacabka.